Nikatona nandritra ny alina i Dunchurch Park Hotel: Tsy misy telefaona, tsy misy tranokala
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Nikatona nandritra ny alina i Dunchurch Park Hotel: Tsy misy telefaona, tsy misy tranokala
Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ny Hotel Dunchurch Park any Dunchurch, tanàna lehibe iray ary paroasy sivily amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Rugby any Warwickshire, Angletera, dia nanafoana ny fijanonan'ny alina, ny fampakaram-bady ary ny hetsika mandroso.
Ny alina, nikatona ny laharan'ny telefaona hotely, ka tsy misy fomba hifandraisana amin'ny hotely na vahiny na media.
Novonoina ny tranokala hotely - tsy eo intsony; tsy misy hafatra farany na fanazavana ho an'ny vahiny na ho an'ny besinimaro.
Ny hotely dia mbola tsy namoaka fanambarana manazava ity fanakatonana haingana ity na izay nahatonga izany.
Ny Dunchurch Park Hotel rehetra dia nanamafy fa mbola miasa izy io ary tsy niditra amin'ny fandraisana na fitantanana.
Ny mpitondra tenin'olona iray dia niditra tamin'ny media sosialy tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ary nilaza hoe: Na izany aza, miasa mandritra io vanim-potoana io izahay ary afaka manazava fa tsy mandray na mandray fitantanana izahay.
“Mandritra izany fotoana izany, miala tsiny amin-kitsimpo izahay noho ny fanelingelenana aterak'izany; izay olana na fanontaniana mikasika ny fiantraikan'ny fanakatonana anay dia tokony halefa imailaka [email voaaro] izay misy mpikambana iray amin'ny ekipanay ho faly hifandray aminao amin'ny fiverenana. ”
Ity hafatra ity ihany dia navoaka tao amin'ny Kaonty Dunchurch Park Hotel amin'ny facebook. Toa nalefa tamin'ny 2:05 maraina. Eo ambanin'ilay fanambarana an-tsoratra dia nanasokajian'ny hotely ny lahatsorany: "Dunchurch Park Hotel voafetra izay afaka maneho hevitra momba ity lahatsoratra ity," izay azo lazaina fotsiny dia tsy tena te hamaly olona izy ireo.
Ao amin'ny Angletera Pejy facebook an'ny hotely, misy ny fiangaviana amin'ny famandrihana vahiny ho an'ny mpivady mariazy:
"Salama????? Fa maninona no tsy misy milaza amintsika ireo mpamaky mariazy ???? Cmon dunchurch. Mitsangàna, lazao anay izay mitranga. ”
Ny tsaho mandeha manodidina ny fanidiana tampoka dia rehefa nisy olona iray namaly hoe: “Nolazaina tamiko fa nandray betsaka tamin'ireo mpitsoa-ponenana tamina vola fanampiana avy amin'ny governemanta izy ireo, avy tamin'ny mpiasa iray io. Manana fifanarahana 12 volana amin'ny governemanta ho an'ireo mpitsoa-ponenana izy ireo. ”
Ny fanambarana nataon'ny hotely fa tokony halefa imailaka ny mpikambana iray ao amin'ny ekipan'izy ireo "ho faly hifandray aminao amin'ny fiverenana", tsy marina. Nanontany ny mpisera facebook iray raha nisy nahazo valiny tamin'ny hafatra an-telefaona na mailaka, nanoratra hoe: "Nanandrana niantso sy nandefa mailaka indray androany - mbola tsy nisy - dia nisy nanam-bintana nankany amin'ny hotely ve?"
Ny valiny rehetra dia nanamarina fa tsy nisy valiny tamin'ny valiny iray: "Tsy misy vintana aminay. Nandefa mailaka izahay, niantso ny andalana rehetra ary nanandrana ny mpandrindra anay ary tsy nisy valiny na fanavaozana. … Tsy manantena fanavaozana aho raha tsy amin'ny herinandro ambony. Raha mikasika ny fampakaram-bady dia hifandray amin'ireo mpamatsy Dunchurch aho satria afaka nahazo fampahalalana bebe kokoa sy fanampiana avy amin'izy ireo noho ny manana ilay toerana na mpiasan'ny hotely! ”
Mitohy ny zava-miafina.
martin marshall hoy:
September 5, 2021 ao amin'ny 10: 51
Salama izahay eto amin'ny fialamboly soavaly adala izay nahalala tamin'ny alàlan'ny bokin-tarehy fa nanafoanana ny mariazy famandrihana rehetra izahay. Niaraka tamin'ny DP nandritra ny 8 taona izahay ary izany no fomba itondrany ny olona tsy Faly. Eto izahay hanampy ny antoko rehetra hifindra amin'ny toerana hafa. fa any andro manokana